Ground Engching Zvishandiso, Track Chain, Undercarital Zvikamu - Chokwadi cheGlobal
Bolt uye Nuts
nezvedu chinotevera chii?
Kugadzika kubvira 1998, Xiamen pasi rose chokwadi (GT) Maindasitiri anoshanda muindasitiri yeBulldozer & Excavator zvikamu zvakasara. Ine anopfuura 35,000 mativi mativi efekitori nenzvimbo yekuchengetera nzvimbo muQANZHOU, CHINA. Yedu fekitori inogadzira undercarriage zvikamu zvakaita track track roller, inotakura roller, track ketani, kumberi idler, sprocket, track adjuster nezvimwe.
6Y3519, 6Y3531, Hunhu hwakanaka ...
Kuumba chikamu che S ...
JCB yepamusoro roller inotakura roll ...
Tengesa Excavator E320L ...
JCB track roller JCB mhezi ...
chinhu chinoshandiswa zvinoshandiswa
Bulldoze segment boka D155 D85 D6D D7G D5 D65 ...
Makore 22+ uye kuenda akasimba
Ine anopfuura 35,000 mativi mativi efekitori & nzvimbo yekuchengetera nzvimbo muQANZHOU, CHINA. Yedu fekitori inogadzira undercarriage zvikamu zvakaita track track roller, inotakura roller, track ketani, kumberi idler, sprocket, track adjuster nezvimwe. Zvimwe zvikamu, sere track track bolt / nati, track bhutsu, track pini track bushing, bhakiti, bhaini pini, bhachi bhandi, mazino emugomo, bhachi adapter, breaker nyundo, chieri, track muchina, rabara track, rubha pad, injini zvikamu, blade, yekucheka kumucheto, mini excavator zvikamu nezvimwe.